Enwere ike ibuli ihe ndozi ụgbọ ala na-ebuli elu, imepụta ọhụrụ, dị mfe iji, nke a na-ejikarị emezi ụgbọ ala, na-eji ngwá ọrụ a dị elu nke ụgbọ ala ahụ, ndị ọrụ mmezi dị mma iji rụkwaa ụgbọ ala ahụ.
Ngwaahịa ahụ bụ 115cm ogologo ma nwee ike ibili ma daa na 25-38cm. Emere ya nke igwe na otu ihe dika 19-25kg.
Mee ka ọrụ mgbapụta ụgbọ ala na-arụ ọrụ dị mfe na nkasi obi na ala nke ụgbọ ala ahụ
Igwe eji ahịhịa ahịhịa dị mma maka ihichapụ mmebi ma na-enyere aka ịmepụta ọhụụ ọhụrụ maka ahịhịa zuru oke. Nhọrọ mbu nke ugbo ezumike n'èzí, adaba, bara uru na oru oma. Nchekwa gburugburu ebe obibi Tupu ịmalite ịgha mkpụrụ ahịhịa ọhụrụ, igwe na-acha ahịhịa nwere ike inye aka mee ka ala dị larịị. Mgbe ịgha mkpụrụ, ịtụgharị na-enyere aka ngwa ngwa germination site n'ịhụ na mkpụrụ na-akpọtụrụ ala. Jiri ahịhịa jupụtara na mmiri iji nyere sod aka ọhụrụ, wepụ akpa ikuku ma hụ na mgbọrọgwụ na-akpọtụrụ ala. Ọ bụrụ na òké na ụmụ ahụhụ emebi ahịhịa gị, igwe na-ehicha ahịhịa na-enyere aka eme ka ahịhịa ahụ dị nha maka ịdị n'otu.
Nhọrọ mbu nke ugbo ezumike n'èzí, adaba, bara uru na oru oma. Enwere ike iji ngwaahịa a n'ọtụtụ oge ezumike n'èzí, dị ka ịga ogige maka ezumike, ịga n'èzí nwere ike iji ụfọdụ nri, mmiri, ihe oriri na ihe ndị ọzọ. Gaa n'ọhịa ihe osise, oge ezumike, wdg. Enwere ike iji ya mee ihe ndị dị mkpa, dị mfe iji.
Mee ụgbọ ala rampi nke dochie anya ọrụ na-arụ ọrụ dị mfe na nkasi obi na ala nke ụgbọ ala ahụ. n'azụ ụzọ, gburugburu ifufe na mmiri ozuzo n'echebe n'ihu ọnụ ụzọ, Upper ntupu Net na sealable mkpuchi; na reflective ibe na reflectors
Concrete igwekota Truck, Caster ụkwụ anọ, PU Wheel, China Concrete igwekota, China PU wiil, China Pu ụfụfụ Wheel,